Ny kaominaly : finiavana hitsinjara fahefana toy inona moa ? | SEFAFI
Ny lalàna ilaina hanaovana ny fifidianana kaominaly ny taona 2015 dia nankatoavina sy tafavoaka ihany na dia nanahirana aza. Tsy iverenana intsony ny fomba nisavorovoro nentina nanolotra ireny lalàna ireny, novaina, notsipahina manontolo na tamin’ny am-pahany noho izy tsy mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana, dia nankatoavina, ary farany – ela ny ela – mba navoaka ihany..., saingy mbola tsy tafavoaka daholo akory izy rehetra. Ireny fiovaovana ireny dia nampientanentana ny mponina, fara faharatsiny ny mponina an-tanàn-dehibe izay afaka manara-baovao, mikasika ny fisian’ireny lalàna ireny aloha, ary koa mikasika ny hevitra raketiny na dia tsy lasa lavitra firy aza izany. Tamin’ny fotoana nanimban’ny andro ratsy zavatra maro taty afovoan-tany, tamin’ny volana janoary sy febroary, no niketrehana ireo lalàna ireo, ary teraka tamin’izany ny adihevitra momba ny fitsinjarana ny fahefana eo amin’ny Fanjakana foibe mpampivondrona sy ny CTD (Vondrom-Paritra Itsinjaram-pahefana). Tokony ho mialoha ny nitondrana ny lalàna tany amin’ny Antenimieram-pirenena no natao izany adihevitra izany, ary io no tokony ho loharanon-kevitra mandritra ny fampielezan-kevitra mikasika ny fifidianana kaominaly.
Malaina hitsinjara fahefana ny Fanjakana foibe
Ny lalàna fehizoro lah. 2014-018 mikasika ny Vondrom-Paritra Itsinjaram-pahefana dia ahitana taratra ny fiheveran’ny fitondrana ankehitriny ny fitsinjaram-pahefana. « Ny fitsinjaram-pahefana dia miara-dalana amin’ny fanapariahana ny asan’ny Fanjakana mba hanamafisana ny fahafahan’ny CTD miatrika asa. Tsy maintsy mifandraika ny fahefana nitsinjarana fahefana sy ny fahefana napariaka » (and. 6). « Ny fanjakana irery no hany manana ny fahefana mifehy ny fandaminana ankapobeny. Izy no mametra amin’ny alalan’ny lalàna sy ny fitsipika ny fepetra ampiasan’ny CTD ny fahefany » (and. 17). Izany hoe ny fahefana enti-miasan’ny olom-boafidy any an-toerana izany dia fanomezana avy amin’ny fitondrana foibe izay manana zo hanara-maso akaiky io fahefana io, eny hanisy fetrany azy mihitsy aza.
Io zo nomen’ny Fanjakana ny tenany mba hitsabaka any amin’ny fitantanan’ny CTD ny raharaha eny an-toerana io dia asehon’ny fampiatoana, vao tsy ela akory izay, ben’ny tanàna voafidim-bahoaka, fanapahan-kevitra mifanohitra amin’ny voalazan’ny andininy 127 ao amin’ny lalàna lah. 2014-020 mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Ny fampiatoana ny ben’ny tanàna ataon’ny minisitry ny Atitany tokoa mantsy dia tsy maintsy mandalo amin’ny fiaraha-midinika amin’ny filankevitry ny kaomina/ny tanàna voakasik’izany, ary tsy mahazo mihoatra ny iray volana ny faharetany. Toraka izany koa ny momba ny finiavana hitam-poko hitam-pirenena handika ny andininy 130 izay manakana, « na inona na inona mitranga », ny filatsahan’ny delegasiona manokana hofidiana (na prezidà izany na ny lefiny) amin’ny fifidianana ho avy.
Mbola mainka koa mampiahiahy ny fahatsapana fa, na dia any amin’ny sehatra fara tampon’ny Fanjakana aza, dia tsy hay ny manavaka ny fahefan’ny ben’ny tanàna sy ny an’ny manam-pahefana ambony ao amin’ny Fanjakana foibe. Hany ka, ny fitokanana ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra (tao Iavoloha sy tany Toamasina), izay tena ny andraikitra voalohan’ny ben’ny tanàna, dia nangalarin’ny Filoham-pirenena.
Etsy an-danin’izany, ny lalàna fehizoro dia milaza fa ny famindrana ny fahefana avy any amin’ny Fanjakana mankany amin’ny CTD dia tsy atao raha tsy arakaraka ny fahaiza-manaon’ny CTD ; izany hoe, tsy hitovy izany io famindram-pahefana io eto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary mety hiankina amin’ny fiheveran’ny solontenam-Panjakana na ny loko politikan’ny olom-boafidy ao amin’ilay CTD. Inona ny mason-tsivana ampiasain’ny Fanjakana foibe ary rahoviana izy no « hanapaka » fa efa mahazaka tena ny CTD iray ? Nefa ny andininy 4 amin’ny lalàna fehizoro dia milaza mazava fa ny fitsinjaram-pahefana dia « famindrana any amin’ny CTD ny fahefana tokony ho azy manokana izay hafa noho ny an’ny Fanjakana ». Tena miharihary eto ny fifangaroana eo amin’ny fanapariahana (ilaina ho an’ny fampandrosoana) sy ny fitsinjarana.
Mamerimberina matetika ny lalàna fehizoro lah. 2014-018 fa « ny famindram-pahefana dia tsy maintsy miaraka amin’ny famindran’ny Fanjakana mankany amin’ny CTD koa ny fitaovana sy ny vola ilaina mba hanatontosany ny andraikiny araka ny fepetra noferan’ny lalàna » (and. 24 sy 45). Ny traikefa dia mampiseho fa ny fomba mahomby indrindra hanakendana ny fizakan-tena sy ny fandraisana andraikitra any an-toerana dia ny tsy fanomezana fitaovana. Fantatry ny mponina eto Antananarivo loatra izany : ny ben’ny tanàna no mahazo tsiny rehefa misy simba ny fotodrafitr’asa eto an-tanàna (fampiharana ny famindram-pahefana), nefa tsy misy mihitsy na kely aza fanampiana avy amin’ny Fanjakana foibe, iarahan’ny rehetra mahalala tsara fa tsy ampy mihitsy raha izay volan’ny tanàna manokana no hikarakarana ireny fotodrafitr’asa ireny (tsy nisy ny famindrana ny fitaovana). Ampahany ohatrinona amin’ny tetibolam-pirenena 2015 no natokana ho an’ny CTD ? Nandritra ireo taona faramparany ireo dia tsy nahatratra afa-tsy ny latsaka ny 5% izany, fa ny 95%-n’ny tetibola dia nogiazan’ny Fanjakana foibe - aiza àry izay famindram-pahefana ?
Roso amin’ny fifidianana hampisavorovoro indray
Hita aloha fa mifamahofaho ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanitaran’ny Fanjakana foibe ny fahefany amin’ny alalan’ny fanapariahana, fa mbola eo koa ny fam-pidirana politika amin’ny fanomanana ny fifidianana kaominaly. Ny andininy 310 ao amin’ny lalàna lah. 2014-020 dia manantitrantitra fa « ny prefet no mamaritra amin’ny alalan’ny didim-panjakana ny isan’ny mpikambana hofidiana ao amin’ny filankevitry ny tanàna miainga amin’ny isan’ny mponina hitan’ny Lehiben’ny Distrika taorian’ny fanisam-bahoaka nataony ». Vao haingana no notendrena ny prefet-n’ny faritra mba hanao sonia ny didim-pitondrana mametra isaky ny kaomina ny isan’ny mpanolotsainan’ny tanàna ho avy, dia manome tombon-dahiny goavana ho an’ny antokon’ny fitondrana satria izy hahalala mialoha ny hafa ny isa marin’ny kandidà ilaina ho an’ny antontan-taratasy takian’ny CENIT. Manginy fotsiny ny hoe ny firotsahana hofidiana dia mila famoronana antontan-taratasim-panjakana (biletà nahaterahana, fanamarinana avy amin’ny fitantanan-ketra, fanamarinana ny maha voasoratra ao anaty lisi-pifidianana, extrait du casier judiciaire) izany dia efa tombony sahady ho an’ny antoko eo amin’ny fitondrana. Fantatry ny olom-pirenena rehetra fa tsy amin’ny minitra farany mihitsy akory vao ndeha hanao izany ; nefa satria ny 15 avrily no notendrena ny prefet, ary ny fe-potoana farany handraisana ny filatsahan-kofidiana dia ny 8 mey, dia hita fa mihafohy hatrany ny fotoana eo am-piandrasana ny famoahana ny isa marin’ny kandidà ho an’ny kaomina tsirairay (afa-tsy ho an’Antananarivo, tompon-daka amin’ny isan’ny mpanolotsainan’ny tanàna tafakatra hatrany amin’ny 55).
Efa maro sahady ireo kandidà no voalaza fa hilatsaka tsy miankina, ary mbola tsy misy fepetra horaisina mba hiantohana ny hampangarahara ny vola lany amin’ny fifidianana. Manampy trotraka an’izany ny fampiasana fitaovana vaovao momba ny haino aman-jery izay manana firehana politika, nefa mbola tsy mitovy foana ny fidiran’ny kandidà any amin’ny haino aman-jerim-panjakana, anisan’izany ny any ivelan’ny fitondrana, na dia eo aza ny fepetra noraisin’ny Lalàm-pifidianana. Ahoana moa, manoloana izany rehetra izany, indrindra any amin’ireo kaomina an’arivony any ambanivohitra, no hahalalana ny fandaharan’asa atolotry ny lisitry ny kandidà – satria tsy maintsy takiana ny fandaharan’asa ?
Eo anatrehan’izany, ny fifidianana kaominaly dia toa ho dingam-pifidianana hafa mbola ho « efa fahita » ihany indray, ao anatin’ny tontolo miaina fampihavanam-pirenena nandamoka. Ny ahiana dia ny hisian’ny filankevitry ny tanàna tena misamatsamaka tanteraka, miaraka amin’ny filohan’ny mpanantanteraka tsy manana ny maro an’isa ka hoviravirain’ny tetiky ny Fanjakana foibe fotsiny. Tsy fitia hanatevina ny hevitr’ireo izay mitady lalana hanemorana ny fifidianana, fa ny SeFaFi dia manahy indray sao isika mbola tsy nahazo fampianarana ihany na iray aza avy amin’ny hadisoana vita tany aloha.
Ny kaominaly, dia ahoana ny tohiny... ?
Ny kaomina irery aloha hatramin’izao no vondrom-paritra itsinjaram-pahefana anaovana fifidianana, nefa ny fahatongavana eo amin’ny fitantanana azy dia tena manahirana tanteraka. Fa ohatra ny mbola ho henjana kokoa ny fanamby ho an’ireo izay ho lany eo satria tsy tena mazava ny fahefan’ny ben’ny tanàna tsirairay sy ny tontalin’ny vola azony antenaina ary tsy hadino koa ny fitsabatsabahana ara-politika tsy maintsy mbola hataon’ny fahefana foibe.
Mipetraka koa ny olana momba ny fifidianana loholona. Misy ilay andininy 127 hafahafa ao amin’ny « fepetra tetezamita »-n’ny lalàna fehizoro lah. 2015-007 izay mametra ny fitsipika mikasika ny fiasan’ny Antenimieran-doholona ka manamarika fa « ho an’ny fifidianana voalohany ny loholona amin’ny Repoblika Fahefatra, ny mpifidy maventy dia ny Mpanolotsainan’ny kaomina sy ny tanàna ary ny ben’ny tanàna ». Fa nahoana ? Inona no manakana ny hanaovana ny fifidianana rezionaly sy provinsialy amin’ny septambra – oktobra, dia atao ny fifidianana ny loholona amin’ny volana novambra ? Ireo fifidianana ireo dia fifidianana tsy mivantana, ary tsy mahakasika afa-tsy olom-bitsy. Indrindra moa fa ny Antenimieran-doholona dia « misolo tena ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana » (Lalàmpanorenana, and. 81) : raha ny mpanolotsainan’ny kaomina na ny tanàna fotsiny no asaina mifidy ny Loholona, ka akifika ny lehiben’ny faritra sy ny mpanolotsainam-paritra ary ny lehiben’ny faritany sy ny mpanolotsainam-paritany (Lalàna momba ny antenimieran-doholona, and. 80) dia voahitsakitsaka ny hevitry ny Lalàmpanorenana - fandikana ny lalàna fototra izay ohatra ny tsy tsikaritry ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. Azo antoka fa mbola misy indray tetitetika politika mirefarefa amin’ny tany ao ambadik’io fepetra io.
Etsy an-daniny, mbola tsy mazava sy tsy hentitra foana ny satan’ny sefo fokontany ao amin’ny lalàna mifehy ny fitsinjaram-pahefana, dia varavarana midanadana io ho an’ny fifandonana ara-pahefana eo amin’ny ben’ny tanàna sy ny minisiteran’ny atitany. Ny SeFaFi dia efa nangataka hatrany ny hifidianana1 ny sefo fokontany ka hanomezana sata mendrika an’ireny mpiasa tsy azo ialana amin’ny fitantanana ny eny an-toerana ireny (mazava ho azy fa izany dia karama mendrika ary fitaovam-piasana ahombiazana). Fantatry ny mponina tsara mantsy ny sefo fokontaniny, ary io dia tsy marina ho an’ny ben’ny tanàna, toy izany koa ny solombavambahoaka, ny lehiben’ny faritra na ny minisitry ny Atitany. Araka ny fepetra voalazan’ny andininy 5 ao amin’ny didim-panjakana 2007-151, ny fotoam-piasan’ny olona ao amin’ny komitim-pokontany dia mitsahatra raha vao voafidy ny ben’ny tanàna. Angatahin’ny SeFaFi àry ny hampiharana ara-bakiteny an’io fepetra io ka hotanterahina avy hatrany aorian’ny fifidianana kaominaly ny fifidianana sefo fokontany vaovao. Amin’izay dia afaka miara-miasa tsara ny olom-boafidy ao amin’ny kaomina/tanàna sy ny ekipa vaovao any amin’ny fokontany ka ho voavaha ny olana ara-tsosialy sy toekarena mianjady ao.
Mety ho efa mamerimberina ny SeFaFi, nefa malahelo izy satria tsy misy mihitsy na kely aza finiavana politika hampijoro fitsinjaram-pahefana tena izy, toy izany koa ny andrim-panjakana rehetra ho an’ny Repoblika, ambaindainy faran’izay bitika indrindra ho an’ny Fanjakana tan-dalàna.
1 Jereo « Sefo Fokontany hoe ? Fa ho aiza isika ? », fanambarana tamin’ny 18 oktobra 2007 ao amin’ny SeFaFi, L’Observatoire de la vie publique à Madagascar. D’une crise à l’autre (2001-2013), Foi & Justice, 2014, t. 199-204. Ary « Fokonolona sy Fokontany : alefa hatramin’ny farany ny adihevitra », ao amin’ny fanambarana « Fitsinjaram-pahefana toa inona ho an’i Madagasikara ? » tamin’ny 28 marsa 2008, idem, t. 222-223.
Antananarivo, androany faha-18 Aprily 2015